Kitra – Fifaninanam-pirenena 2019: vitaina ao anatin’ny herinandro ny fihaonana rehetra | NewsMada
Kitra – Fifaninanam-pirenena 2019: vitaina ao anatin’ny herinandro ny fihaonana rehetra
Henjikenjika be ny fifaninanam-pirenena, eo amin’ny taranja baolina kitra. Araka ny tetiandro navoakan’ny “comité de normalisation”, hovitaina alohan’ny 9 jona ny fihaonana rehetra. Ny alatsinainy 10 jona izany, dia efa fantatra avokoa ireo ekipa roa hisolo tena an’i Madagasikara, eo amin’ny fifaninanana afrikanina dia ny fiadiana ny ho tompondaka sy ny amboara.
Araka izany, ao anatin’ny herinandro no hanatanterahana ireo ambin-dalao rehetra. Hanomboka izany, ny fanatontosana ny herinandro fahenina, amin’ny “Thb ligue des champions”, ny 29 sy ny 30 mey ho avy izao. Hotanterahina, any Mahajanga sy Tsiroanomandidy ary Fianarantsoa, izany.
Ny alahady 2 jona kosa no hanaovana ny lalao famaranana, hiadiana ny amboaran’i Madagasikara “Telma coupe de Madagascar”, hikatrohan’ny Fosa Jr Boeny sy ny Cnaps Sport Itasy. Lalao, hotanterahina etsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina.
Hamarana ny fandaharan-dalao, amin’ity taom-pilalaovana 2019 ity, ny andro fahafito sady farany, ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, izay hatao etsy Mahamasina sy eny Vontovorona ary any Toliara.
Tsiahivina fa mitarika eo amin’ity “Thb ligue des champions” ity, ny Fosa Jr Boeny, manana isa, 11. Manaraka azy ny Cnaps Sport, isa 10 ary ny Adema nahazo isa 9. Tsy mbola misy afaka miteny ho efa tompondaka alohan’ny fotoana aloha, raha ny zava-misy eo amin’ny vokatra no lazaina.
Mbola hafana vay tanteraka, araka izany, ireo andro roa farany, eo amin’ity fifaninanam-pirenena, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara ity.